Iimbali zeendaba eziyaziwayo kakhulu zengingqi kunye nelizwe
I-angle iyona ngongoma okanye umxholo weendaba okanye ibali lebali, eliqhelekileyo lifumaneka kwinqanaba le nqaku. Yile lensi apho umlobi ecoca ngolwazi aqokele ngalo. Kukho iindidi ezahlukileyo ezahlukahlukeneyo kumcimbi weendaba omnye.
Ngokomzekelo, ukuba umthetho omtsha udluliselwe, iimbombo zingabandakanya iindleko zokuphunyezwa komthetho kwaye apho kuza kubakho imali, abameli ababethethayo kunye nabanyanzelisa umthetho, kunye nabantu abachaphazelekayo kakhulu ngumthetho.
Ngelixa elinye ngalinye lale liyakwazi ukufakwa kwibali eliphambili, elowo uhlawulela ibali elihlukile.
Iintlobo zeeNtshumayelo zeBali
Zobabini iindaba kunye neembali zamabakala zinokuba neengalo ezahlukeneyo. Imizekelo embalwa ibandakanya i-angle yangaphakathi, i-angle yesizwe, kunye nebali lokulandelelana.
I-angle yangaphakathi: Ngamanye amaxesha abathatheli bacela ukuba "bafumane ibali." Unako ukufumana ibali leendaba lelizwe, njengesiqhwithi esichitha iifudlana ngaphesheya kwe-East Coast. Kodwa i-newslet eFlorida iya kugxininisa ngokukodwa kwindawo apho abafundi bayo / ababukeli bekhona khona.
I-angle yeSizwe: Le ndlela ithathwa ngamabakala amakhulu, iziqendu, kunye nemiba echaphazela ilizwe lonke. Umzekelo uya kuba njani uMongameli uBarack Obama ojongene nokuNakekelwa koMninimzi ochaphazelekayo wabathintela amaMelika ahlukeneyo kumaqela eentlalo ezahlukeneyo.
Ibali lokulandelelana: Emva kokuba ibali leendaba eziphambukayo lihlasela i-intanethi kunye namaphephandaba, abali-ntatheli baya kubhala ibali lokulandelelana apho i-lede igxininise ulwazi olutsha. Ukusebenzisa isitayela sepiramidi esingapheliyo yokubhala - apho ulwazi oluchanekileyo luphezulu kwiphepha - inqaku elilandelelanayo linika abafundi abafundi iinkcukacha ezintsha ezilandelwayo kwimvelaphi efunyanwa kwibali lokuqala.
Ukufunyanwa kweNgingqi yeNgingqi
Ngoko udibanise amapolisa asekuhlaleni, iholo yasezidolophini kunye nenkundla yamabali, kodwa ufuna enye into. Iindaba zeSizwe kunye namazwe ngamazwe zizalisa iphepha lamaphepha amakhulu amakhulu, kwaye abaninzi abaqala intatheli bafuna ukuzama isandla sabo ngokugubungela amabali amakhulu.
Kukho into enjenge-over-locating ibali. Ngokomzekelo, ukuba uJohn Smith ukhethwe kwiNkundla ePhakamileyo, kwaye waya esikolweni esiphakamileyo edolophini yangakini, ngoko yindlela efanelekileyo yokufumana ibali likazwelonke. Ukuba wayetyelela idolophu yakho ngelixa wayesekholejini, mhlawumbi ulula, kwaye akayi kuyenza ibali lichaphazelekayo kubafundi bakho.
Iibhilo ezivela kwiindaba ezilungileyo Izigwebo
Abathathi bamashishini kufuneka bahlakulele oko kubizwa ngokuthi "iindlebe zeendaba" okanye "impumlo kwiindaba," ukuvakalelwa ngokwemvelo yinto ebalulekileyo ibali. Akunakuba njalo ibali elibalaseleyo, kodwa amava angabancedisa abavakalisi ukuba baqale apho ibali elibalulekileyo liqala khona.
Ukuphuhlisa ukuvakalelwa kwinto ebalulekileyo ibali yinto eninzi yabafundi bezentatheli. Kungathatha ixesha kunye nemizamo ukuphuhlisa lo mqondo. Indlela eyona ndlela yokufunda indlela yokufumana iingcamango zamabali amahle kukuba ukulandelelana kunye nezithambile. Bakha njani oonxibelelwano kunye nemithombo? Baya kuphi, kwaye baxoxa bani na? Ziziphi ezinye iindwendwe abazifundayo?
Le yindlela efanelekileyo yokuhlakulela ingqalelo nje yezona ndlela ezilungileyo zokugubungela iindaba, kodwa indlela yokufumana i-angle apho abafundi bakho bayakukhathalela kakhulu.
Indlela yokubhala iNqaku elifutshane leMidlalo yabaLwazi beMidlalo
Yiyiphi Imfundiso Yobulungisa?
Indlela yokubhala i-Great Ledes yeziganeko zeendaba
Ukujonga kwiiNdawo ezahlukeneyo zoMsebenzi weeNdwendwe kunye neMisebenzi
Iingcebiso zokubhala 5 Iintlobo zeendaba zeMidlalo
Kutheni Abantu Abaselula Abafunda Iindaba?
Ukufumana nokuphuhlisa iimbono zeendaba zeendaba kunye namaxwebhu
Iingcebiso zokuvelisa iindaba ezimnandi zeendaba ezilungileyo
Umzila weMormon woovulindlela
I-Corning Ware Cookware Iifoto kunye neeNkokeli zamaxabiso
I-Photorealism: Yiyiphi iNqaku?
Iifoto zeOlimpiki zeeKlabhu - iLake Course
Yintoni I-Astronomy and Who Does It?
Top 10 Eminem Iingoma
20 Izwe Iingoma eziza kukunceda uzivele iiBlues
Isikhokelo soMqala kwiNguqulelo yesiFrentshi
Idioms kunye neNkcazo-Ixesha
I-Verlan - iSlangisi saseFrench
Imithandazo yamaPagan kunye neWiccan onke amaxesha
Iingcaphuno ezingama-30 kwi-Reincarnation
Crucigramas: Yenza i-Crossword Puzzles kwiSigaba sakho saseSpain
Quick Uranium Facts
I-Exclusive 'We' (igrama)